: at 7/01/2011 10:38:00 AM
နာကျင်တာလေးတွေ ဆက်ကြရအောင် ။ရုပ် နာမ် နှစ်ပါး ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ ခန္ဓာကြီးဟာ လည်း တရားသဘောနဲ့ကြည့်ရင် ဘာမှ မမြဲပါဘူး ၊ ဖြစ်ပျက် အစဉ်အရ ဖြစ်ပေါ် တည်ဆောက်လာပြီးတဲ့နောက် ဟောင်းဆွေး အိုမင်း နာကျင် ပျက်စီးခြင်းတွေ နဲ့ တွေ့ ကြုံရတာပါပဲ။ ပထဝီ တေဇော အာပေါ ဝါယော ဓါတ်ကြီး လေးပါး နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရုပ်ခန္ဓာကြီးမှာ အသား၊ အရေ၊အကြော ၊ အဆစ်၊အူ၊ ကလီစာ အင်္ဂါရပ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပုံမှန်လူသားတယောက်မှာ အရိုးပေါင်း ၂၀၆ ခုရှိပြီး အရိုးတခုနဲ့တခုကို ဆက်ထားတဲ့အရာကို တော့ အဆစ် ( Joint) လို့ခေါ်ကြတယ်။ဒီလို အရိုး အဆစ်တွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲက အတော်များများ နာတတ်ကြတာကတော့ ကျောရိုးဆစ်တွေပေါ့ ။ အဲ့ဒီ ထဲမှာ မှ လည်ပင်းနဲ့ခါးဆစ်တွေမှာ နာတတ်တာတွေ ပိုများပါတယ်။
ကျောရိုးဆစ် Vertebra column မှာ ဘယ်ပုံဘယ်နည်း နာကျင်တတ်ပြီး ကုသမှုတွေပေး လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ရတဲ့ အခါ ပိုပြီး ရှင်းလင်း မြင်လွယ် နားလည်လွယ်အောင် သူ့ ရဲ့ တည်ဆောက် ဖွဲ့စည်းပုံလေး ကို အခြေခံ သဘောလောက် တင်ပြပေးပါမယ်။
ကျောရိုးဆစ်( Vertebra column )ဟာ တဖြောင့်မတ်မတ် မဟုတ်ပဲ S ပုံသဏ္ဍန် အနဲငယ် ဝိုက်ပြီး ကွေးနေပါတယ် ။ သူ့ မှာ ရှိတဲ့ အဆစ်တွေကတော့
-လည်ပင်းရိုး ၇ ဆစ် ၊ Cervical 1-7
-ရင်ခေါင်းရိုး ၁၂ ဆစ် ၊ Thoracic 1-12
-ခါးရိုး ၅ ဆစ် ၊ Lumbar L1-5
-တင်ပါးရိုး ၅ဆစ် Sacrum S1-5 နဲ့ မြီးညောင့်ရိုးဆစ် ၄ဆစ် Coccyx တို့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီအထဲမှာမှ တင်ပါးရိုးနဲ့ မြီးညောင့်ရိုးတို့ ဟာ အလွယ်တကူ ကွေးဆန့်လှုပ်ရှားလို့မရအောင် ပေါင်းဆက်နေကြပါတယ်။ ဒီပုံမှာ ပြထားသလိုမျိုးပါ။
အဲ့ဒီ အဆစ်တွေကြားမှာ Intervertebral disc ခေါ်တဲ့ အရိုးနူအပြားလေးတွေက ကူရှင်လို သဘောမျိုး ခုခံပေးထားခြင်းအားဖြင့် အရိုးဆစ် တခုနဲ့တခု ပွတ်တိုက် ပွန်းပဲ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။
အရိုးဆစ် တခုခြင်းကို ကြည့်ရင် ကိုယ်ထည် နဲ့ ဘေးက လက်တံတွေ ပေါင်းစပ်ထားပြီး အလယ်မှာ အကွင်းလိုက်လေးတွေ ရှိပြီး ဒီအကွင်းတွေဟာ ဗဟိုအာရုံကြောမကြီး Spinal Cord အတွက် နေရာပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးကိုယ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အာရုံကြောတွေဟာ ဦးနှောက်မှတဆင့် ဒီ ဗဟိုအာရုံကြောမကြီး အနေနဲ့ ခြေလက် အင်္ဂါအဖွဲ့အစည်းတွေဆီသွားရောက်ပြီး အာရုံခံစားခြင်း လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျောရိုးမကြီးဟာ ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးကို တည့်မတ်အောင် ထောက်ကန်ထားပေးရုံသာမက အာရုံကြောတွေအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ကျောရိုးဆစ်နဲ့အရိုးပျော့အပြားတွေ မှာတခုခု ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခဲ့ရင်၊ ဒါဏ်ရာရတဲ့ အဆစ် လယ်ဗယ် အဆင့်လိုက်ပြီး အတွင်းမှာရှိတဲ့ အာရုံကြောမကြီးပါ ထိခိုက်တတ်ပြီး အကြောသေခြင်း မလှုပ်မရှားနိုင် ဆီး ဝမ်း မထိန်းနိုင်ခြင်း အသက်ရှူမှု ထိခိုက်ခြင်း စသဖြင့် ဖြစ်စေနိူင်ပါတယ်။( ဥပမာ -ဆူပါမင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သူ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားChristopher Reeve ဟာ မြင်းပေါ်ကပြုတ်ကျပြီး လည်ပင်းဆစ် အရိုး1-2 မှာ ထိခိုက်သွားလို့ တကိုယ်လုံး အကြောသေသွားခဲ့ရပါတယ် )
ဗွီဒီယို ပုံနဲ့ကြည့်ရင် ပိုမြင်လွယ်ပါတယ်။
ကျောရိုးဆစ်နာခြင်း - ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလည်း။
များသောအားဖြင့်တော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အရိုးအဆစ်တွေလည်း degeneration ဖြစ်စဉ်အရ အိုမင်း လာကြတယ်။Bone spur ခေါ်တဲ့ အရိုး အတက်ထွက်လာတတ်တယ်။ Spinal disc ခေါ် intervertebral discအရိုးနုအပြားလေးတွေမှာလည်း ခြောက်သွေ့ မာကျောလာတတ်တယ်။ တချို့ အရိုးပြားလေးတွေ နေရာရွေ့ ပြီး အရိုးဆစ်မှကျွံထွက် လာတတ်တယ်။Bulging ပေါ့ ။အဲ့ဒီအခါကျတော့ အရိုးကွင်း အလည်မှာရှိနေတဲ့ အာရုံကြောမကြီးကို ဖိမိပြီး သက်ဆိုင်ရာ နေရာ တွေမှာ ပြင်းထန်စွာနာကျင်စေတတ်ပါတယ်။
တချို့ကျတော့ အရွတ်တွေ မာကျောခြင်း Stiff ligament ၊ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြင်း Trauma ၊ အရိုးဆစ်ယောင်ယမ်းခြင်း( Arthritis) တို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
-ဖြစ်တဲ့နေရာက နာတယ်( ဇက်ကြောတက် ၊ ခါးနာ စသဖြင့် )
-လည်ဆစ် ကျီးပေါင်းတက်တာနဲ့ တွဲဖက်ပြီး ပုခုံးဆစ်ပါနာတတ်တယ်။လက်မောင်းထိနာတတ်တယ်။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။
-ခြေ လက် ဖျားတွေ ထုံကျင်တတ်တယ်။ အပ်နဲ့ထိုးသလို စူးပြီး နာတတ်တယ်။
-Lack of coordination ဆိုတဲ့ ဟန်ချက် မညီ ဖြစ်တတ်တယ်။ တချို့လည်း Difficulty in walking လမ်းလျှောက်ရတာခက်ခဲလာတယ် ။
-ပုံမမှန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှု Abnormal Reflex တွေ ရှိလာတတ်တယ်။
-တချို့ ဆိုရင် ဆီး၊ ဝမ်း မထိန်းနိုင်တာ မျိုး ဖြစ်တတ်တယ် ။
ဖြစ်တဲ့ ကျောရိုးဆစ် နဲ့ အာရုံကြောမကြီးရဲ့ အဆင့်အပိုင်းပေါ်မှာ တည်ပြီး ခံစားမှု တွေ ကွဲပြားတတ်ပါတယ်။
တခြားဘာတွေ တွဲဖက် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သေးလည်း။
အရိုးဆစ်အလည် ကွင်း ကျဉ်းမြောင်းခြင်း၊ အရိုးအတက်ထွက်ခြင်း။ထိခိုက်ဒါဏ်ရာရခြင်း တို့ကြောင့် အာရုံကြောမကြီး Spinal Cord Injury ရပြီး အာရုံခံစားမှုပျက်စီးခြင်း နဲ့ လှုပ်ရှားအကြောသေခြင်း များ ဖြစ်စေတတ်ပါသေးတယ်။
ဘယ်လိုနည်းတွေ နဲ့ ရောဂါရှာဖွေမလည်း။ Tests and diagnosis-
ဒါတွေက ဆရာဝန်တွေ လုပ်ပေးရမဲ့ အပိုင်းဖြစ်တာမို့ အသေးစိတ်သိရန်တော့ မလိုအပ်လှပါဘူး။ ကြားဖူးနားဝရှိအောင် အခေါ်အဝေါ်များကိုပဲ တင်ပြပေးပါမယ်။ X Ray CT ဆိုတာ တွေ က နားရည်ဝ နေလောက်ပါပြီ။
1.Neck flexibility assessment
3.Neck or spinal X-ray.
4.Computerized tomography (CT) scan or magnetic resonance imaging (MRI).
7.Nerve conduction study.
နာကျင်နေရင် ဘာတွေ လုပ်ပေးနိုင်မလည်း။
ရုတ်တရက် ချက်ချင်း နာလာတာမျိုး ၊ အလွန်အမင်းနာနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ ဦးစွာ ပထမ နာကျင်မှု သက်သာအောင် ပြုလုပ်ကြရမှာပါ ။ ဒီတော့ Pain Killer ၊Analgesic၊ Muscle Relaxant အကိုက် အခဲ အနာအကျင် ပျောက်ဆေး အကြောပြေဆေးတွေ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ စားဆေး ထိ်ုးဆေး လိမ်းဆေး ကပ်ဆေး စအိုမှာသွင်းတဲ့ဆေးတောင့် စသဖြင့် သုံးပုံ သုံးနည်းတွေလည်းစုံလို့ ပေါ့။ ခုခေတ်မှာ အသုံးများကြတဲ့ ဆေးတွေကတော့ .....
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) အုပ်စုဝင်၊
Sulindac (Clinoril) စသဖြင့်ပါ။
ထိခိုက်ဒါဏ်ရာကြောင့် နာတယ် ဆိုရင်တော့ ပြင်းထန်စွာလှုပ်ရှားမှုတွေ မလုပ်ပဲ အနားယူရပါမယ် ။ ၂ ရက်အတွင်းမှာ ရေခဲအိတ် ကပ်ပေးနိုင်ပြီး ၂ ရက်ကျော်သွားရင်တော့ ရေနွေးအိတ် သို့မဟုတ် Heat pack သုံးလို့ ရပါတယ် ။ တချို့ကျတော့ အနှိပ်သည်၊ အကြောပြင်ဆရာ ဆိုသူတွေနဲ့ နင်းတာ နှိပ်တာတွေ လုပ်တတ်ကြတယ် ။ အဲ့ဒါက အာရုံကြောတွေ ထပ်မံ ထိခိုက်နိုင်စေတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆင်ခြင်ဖို့လိုပါတယ် ။
ယောင်ယမ်းမှု အနည်းငယ်သက်သာလာရင်တော့ physiotherapy ခေါ် လေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။
အရိုးကျီးပေါင်းတက်၊ အရိုးနု နဲ့ အဆစ် နေရာရွေ့ ခြင်းစသည်တို့ အတွက်၊ ဆွဲဆန့်ခြင်း Traction လုပ်ပြီး ဖိမိနေတဲ့ အာရုံကြောကို လွတ်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။
စက်အထောက်အကူနဲ့ လည်ပင်းအဆစ် ၊ခါးအဆစ် ဆွဲဆန့် ခြင်းများကို အောက်ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
လည်ပင်းဆစ်၊ ခါးဆစ်တို့မှာ ဒါဏ်ရာရ ပြီး အာရုံကြောဖိညှပ်ထိခိုက်ခြင်းမျိုးမှ ကာကွယ်ရန် အထောက်အကူပြု ကော်လာ၊ခါးစည်း အစရှိတာတွေကို တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ လည်ပင်းဆစ်နာ၊ ဇက်ကြောတက်ခြင်း နဲ့ပတ်သက်ပြီး လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါ ။ရှင်းလင်း လွယ်ကူပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲကနေ ဆက်ပြီး ခါးနဲ့အခြား အဆစ်အကြောများအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နည်းတွေကိုလည်း ရှုစား လို့ ရပါတယ်။အချိန်ရရင် အညောင်းအညာပြေ လုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့။အကျိုးမမဲ့စေနိုင်ပါဘူး။
အပေါ်မှ ဗီဒီယိုကလစ်အား ကြည့်ရှု မရနိုင်သောနေရာမှ သူများအတွက် ပုံလေးတွေနဲ့ ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။သို့ ပါသော်လည်း ဇာတ်လမ်းသိပ်ရှည်သွားရင် ဇက်ကြောတက် ပြီး ခါးနာနေမှာ စိုးတဲ့ အတွက် နောက်နေ့ များမှာမှ ဖန်ရောင် ပိတ်ကားပြင်ပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှုစားကြပါရန် .........( ကိုးရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများကို အားကျ၍ )
ပုံများကို ဂူဂယ်မှ ရှာဖွေရယူထားပါတယ်။
:kiki : at 7/01/2011 10:38:00 AM
Unknown said... | Friday, July 01, 2011 12:15:00 PM
မကိကိ like ရှိရင် ကလစ်နှိပ်ချင်ပါတယ်။ :)
မွန်မွန်လဲ neck pain နဲ. shoulder pain ခံစားနေရလို. sport center သွားပီး yoga သွားလုပ်နေခဲ.တာ တော်တော်သက်သာပါတယ်။မကိပြောသလို အကျိုးမမဲ.ရုံတင်မဟုတ် yoga လုပ်ခြင်းဟာအကျိုးအလွန်ထူးကြောင်း လာထောက်ခံသွားပါတယ်။
seesein said... | Friday, July 01, 2011 12:38:00 PM
ကောင်းလိုက်တာ ဒီပို့စ်လေးရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
maylay said... | Friday, July 01, 2011 12:40:00 PM
မမကိရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ဇက်ကြောရော ခါးကြောရော ကျောရိုးရော pain ဖြစ်နေတာ ယောဂနည်းလေးသိသွားလို့ ကျေးဇူးပါ မမ။ လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ အလုပ်ချိန်များတဲ့ဒေသမှာမို့ ဘယ်မှသွားလို့ မရဘူးလေ။ မမပိုစ့်ကို အမြဲတမ်းလာဖတ်ရင် စိတ်ဝင်စား ဝါသနာပါလို့ပဲလားမသိဘူး။ အမြဲ ဗဟုသုတတိုးတာချည်းပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမ။ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
An Asian Tour Operator said... | Friday, July 01, 2011 4:16:00 PM
အတက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ ခါးနာလိုက်၊ ဇက်ကြောတက်လိုက်၊ မျက်ရိုးကိုက်လိုက်....။ ဟိုဟာဖြစ်လိုက်၊ ဒီဟာဖြစ်လိုက်။ နည်းကောင်း လေးတွေ မှတ်ထားရ မှာပဲ။ ကျေးဇူးပါ အစ်မကိ။
ahphyulay said... | Friday, July 01, 2011 4:59:00 PM
မမကီ.၊ သဘောတရားလေး စ,ထားပေးလို့ 
မှေးလိုက်ကြည့်မယ်၊ အဲ့ ဒီ နာကျင်ပျက်စီးလာ
တာတွေဟာ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ ပရမတ်တစ်မျိုး
ဖြစ်တဲ့“ တေဇောဓါတ်” လောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် 
ပါပဲ။ မွေးကတဲက လောင်နေလိုက်တာ စက္ကန့် 
နဲ့ တောင် မရပ်ပါဘူးတဲ့ ။ အိုလေ လောင်လေ
ပါပဲတဲ့ ။ ဆေးဝါး၊လေ့ ကျင့် ခန်းတွေအကူအညီ
နဲ့သက်သာလည်း ခဏပါပဲတဲ့ ။
လွန်ဆန်လို့ မရတဲ့သဘောကို မလွန်ဆန်ပဲ
ရင်ဆိုင်ဘို့လေ့ ကျင့်ရတော့ မယ်လေ..။
ထိပ်မှာ အမ နဲနဲစ,လို့နဲနဲပဲ လိုက်လာတာ
သဒ္ဓါလှိုင်း said... | Friday, July 01, 2011 5:19:00 PM
သဒ္ဓါကဇက်ကြောတက် တတ်လို့ အခုနည်းလေးက
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... | Friday, July 01, 2011 8:48:00 PM
ငယ်တုန်းက တရားထိုင်ရင် အကြာကြီးထိုင်နိုင်တယ်
ခုကျတော့ ဟိုနားကနာ ဒီနားကနာ
လည်ပင်းလည်း နာလွန်းလို့ ကျီးပေါင်းတက်ချင်လားတောင်ထင်မိတယ်။
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) said... | Friday, July 01, 2011 9:33:00 PM
ဇက်ကြောလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြည့်အုံးမယ် မကိရေ ကျေးဇူး ...
လသာည said... | Friday, July 01, 2011 11:03:00 PM
မကိရေ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပိုစ်လေးလည်း ကူးသွားပါတယ်။ အသက်ကလည်း ပို ကြီးကြီးလာ ကွန်ပျူတာရှေ့လည်း အထိုင်များတော့ ဇက်ကြောက တက်သလားမမေးနဲ့ ပဲး))
mstint said... | Saturday, July 02, 2011 12:21:00 PM
လူကြီး လူငယ်များ အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ နည်းပေးလမ်းကောင်းလေးဖတ်သွားတယ် ကျေးဇူးပါကွယ်။
မော်ကွန်းသစ် said... | Sunday, July 03, 2011 12:41:00 AM
Anonymous said... | Monday, July 04, 2011 12:44:00 PM
စာကျွေးလာဆပ်တယ်... အချစ်ဆုံးကြီး matama ရေ
win said... | Tuesday, July 05, 2011 1:36:00 PM